MUDANE, KULAN: “Wax Khilaaf ah oo Puntland ka Jiraa ma Jiro”
Xarunta uu shirka dib u heshiisiinta Soomaalidu ka socda ee Mbagathi-Nairobi waxaan maanta oo axad ah ku waraystay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Puntland, isla markaana ah ku simaha madaxweynha Puntland ee shirka dib u heshiisiinta Soomaalida Mudane Maxamed Axmed Kulan. Mudanaha oo ugu horayn iiga waramay marxaladda uu shirku hadda marayo, waxa uu yidhi:
“Runtii marka shirkan qiimayn lagu sameeyo, guulo aad u balaaran ayuu ku talaabsaday mar haddii axdigii la ansixiyey oo maanta uu dalka Soomaaliya dastuur leeyahay, waxaad garan karaysaa in caqabado iyo dhibaatooyin badan laga soo gudbey, haddana ay faraha hore ku taagan tahay sidii dawladdii Soomaaliyeed ee axdiga la ansixiyey dhaqan gelin lahayd loo dhisi lahaa, baarlamaankii iyo xukuumaddii in la dhiso ayuu shirku ku guda jiraa, beelihii baa wax qaybsigii ku dhex jira, xarumo ayaa loo kala sameeyey, xoghayno IGAD ka socdaa loo sameeyey, adduunka oo dhan baa isku raacay in wejiga 3aad oo qorshiisu ahaa in dawlad Soomaaliyeed la dhiso oo ay Soomaaliya dhibaatooyinkii 13’ka sano ka taagnaa ka baxdo in lagu jiro. Waxaad mooddaa in taas loo bisil yahay marka adduun weynuhu siduu u danaynayo la eego, marka shacabka Soomaaliyeed siduu u danaynayo la eego, marka la eego niyad wanaaga eragada Soomaaliyeed ee muddada sanadka ah shirka joogtey, maxaa yeelay ergadii shirka lagu casuumay madasha shirka way ku sugan yihiin, laba saddex qof mooyaane”
Somali Talk: In kastoo axdigii la ansixiyey haddana waxaa jira rag ka mid ahaa siyaasiyiintii saxeexay heshiiskii xabad joojinta ee Eldoret oo shaaciyey inaysan ansixinta axdiga waafaqsanayn, C/qaasimna wuxuuba sheegay inuu shirku bur-buray, isla markaanas wuxuu abuuray isbahaysi lid ku ah shirka, adiga iyo hogaamiyaasha badan ee shirka joogaana waxaad qabtaan in wejigii 3aad lagu gudo jiro. Xagee bay wax iska weeydaarsan yihiin?
Mudane Kulan: Horta C/qaasim shirkan kama casuunayn, Guddoomiyihii baarlamaanka TNG oo dawladda u sarreeyey iyo Ra’isal wasaaraha ayaa shirka ku casuunaa oo TNG’da wakiil u ahaa, waxa runta ah waa in loo leexdo, dadkii shirkan ka casuunaa way joogaan, ilaa iyo hadda cid shirka waan ka baxnay tirina ma jirto, maxaa yeelay nimanka kale oo aad hadda tilmaantay wakiilo ayaa ka jooga. Masalan Caato wakiilkiisii rasmiga ahaa iyo ergadiisii ayaa jooga oo axdiga wax ka ansixiyey, ninka Barre Hiiraale la yiraahdo wakiil baa u fadhiya oo isaguna wax ka ansixiyey axdiga oo weli meesha jooga, xitaa Muuse Suudi nin baa ka jooga, sidaa darteed marka shirkaas xaqiiqda laga sheego ansixinta axdiga waa loo dhamaa oo sida qoraxdu u muuqato ayeey u muuqdeen, beenna lagama sheegi karo.
Somali Talk: Waxaa jira dad sheegaya inay madasha shirka habacsanaani beryahan ka muuqato oo aanay wax shir ahi socon ama uu shirku hakad ku jiro, xagee Mudane shirka laga haystaa?
Mudane Kulan: Isimadii loo saaray wax qaybta ayaa goobo madasha shirka ka baxsan oo magaalada dhexdeeda ah loo cayimay si ay wax ugu soo qaybiyaan, dooddii odayaasha intaasaan leenahay, iyo intaasdaan leenahay baa lagu dhex jiraa, haddee ergada kale hawl weyn oo kale oo u taalla oo saas ahi ma jirto. Shirka Uganda ee IGAD ayaa isna beryahan jirey oo ay dadkii shirka hogaaminayey ku mashquuleen si ay warbixinta shirka u hor geeyaan, shirku waa socdaa maalin ma hakan, hase ahaatee marxalad, marxalad buu leeyahay hadda waxaan ka warhaynaa inay beelaha qaarkood qoristii magacyada xildhibaanada guda galeen, shirku wakhti geba-gebo ah buu marayaa, haddana waad la socotaa in shirkii IGAD soo geba-geboobey, 28’kana wasiirada arimaha dibedda ayaa Nairobi imanaya, shirka sidii loo dhamays tiri lahaa oo uu u midho dhali lahaa ayaa todobaadka soo socda bilaabmi doona, haddii Alle idmo.
Somali Talk: Ma jiraa qabiil ilaa iyo hadda ku heshiiyey qaybta xubnaha baarlamaanka?
Mudane Kulan: Beelaha ay hadda arrintoodu meesha fiican marayso waxaa ka mid ah Dir, Hawiye, beesha Daarood’na iyaga qudhooda arrintu way u socotaa Isniinta berrito ayaan ku rejo weynahay inay hawshooda soo gudbiyaan. Digil iyo Mirifle iyagana hawshoodu way u bisishahay, beelaha is bahaysiga ayaa arintoodu taag-taagan tahay oo laga yaabaa in guddi dhex dhexaad ah loo sameeyo, arrimuhu halkaasay marayaan oo shirku ifafaalo guul ah ayaa ka muuqda, Soomaaliyana inay dhibaatada ka baxdo ayaan rejaynaynaa.
Somali Talk: Shirku sanad baa hadda u dhamaaday, rejo wanaagsana waad ka muujisey, muddo intee le’eg buu sanadkaa u go’ay ku sii darsan karaa bay kula tahay?
Mudane Kulan: Illaahay baa og, hase ahaatee waxaan qabaa inuu bishan barakaysan ee Ramadan ee la galay uu midho dhali doono.
Somali Talk: Mudane, bal nooga warran xaaladda guud ee Puntland ay hadda ku sugan tahay?.
Mudane Kulan: Xaaladda guud ee Puntland aad bay u wanaagsan tahay, wax dhib ahi kama jiraan, mar dhoweyd baan madaxweynihii Puntland oo hawl dhulkii u aaday wada xariiray, dhibaatada ugu weyn ee ka jirtaa waa abaaro dhulka ka jira, dhinacyada nabad gelyada, horumarka ama ganacsigu aad bay u fiican yihiin. Haddee Puntland deganaansho nololeed baa ka jirta, lugaheeday isku taagtay, dibedaha ku-tiri ku-teen iyo dacaayado aan weligood dhamaanayn oo ay dadka aan wanaaga Puntland jeclayni wax bay ka sheegaan, laakiin runtu waxay noqonaysaa mar walba inay sheegaan ma ahee wixii ay sheegaan hadday soo bixi waayeen inay shacabvka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aysan dadka dacaayadhaas wada aysan dhegaysane xaqiiqda arkaan oo xitaa hadday doonaan tagaan. Puntland waa dawlad goboleed Soomaaliyeed oo federal la noqon doonta Soomaaliya inteeda kale.
Somali Talk: Xaaladda abaartu waa sidee, wax roob ahise weli ma da’ay?
Mudane Kulan: Wallaahay abaaraa jira, adduunka oo dhanna waa la gaadhsiiyey, dawladduna way ku dhawaaqday, annaguna halakan dawlado badan baanu u sheegnay, adduunyadana inay gurmad dadka la soo gaaraan baan ka codsanay. Arrinta abaartuna waxay ka mid tahay hawlaha uu madaxweynuhu hadda Puntland u joogo, waana arrimaha uu ayaamahan dib ugu dhacay in ay dawladdu gurmad u samayso meelaha ay abaaruhu ka jiraan.
Somali Talk: Waxaa beryahan la buun-buuninayaa inuu khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka DG Puntland, wararkaas xaqiiqdooda runta ahi maxay tahay?
Mudane Kulan: Arintaas Nairobi iyo meelahaas baanu ka maqalaa, si toos ah ayaan ula xiriiray Puntland, wax khilaaf ah oo Puntland ka jiraana ma jiraan, ma jiraan, gacmahaa la is wada haystaa, meel maamul ka jiro is jiid jiid iyo wax waa ka dhacayaan, waayo nolol degan iyo nidaam baa ka jira, wasiiradii baa jira, wasiir ku xigeenaa jira, baarlamaan baa jira, agaasimayaashii baa jira, ciidamadii baa jira, dawlad dhan oo dhisan baa Puntland ka shaqaysaa marka dee weligeed bay dawladi leedahay hawsheeda iyo is riix-riixeeda, waxaas oo kalena khilaaf iyo dhibaato weyn laguma sheegi karo, madaxweynahaana wixii saxitaan ah u tegey, wax dhibaato ah oo hadda Puntland ka jiraana ma jiraan.
Somali Talk: Marka madaxweynuhu inuu dhowaan madasha shirka soo gaadho ma laga yaabaa?
Mudane Kulan: Haa, madaxweynuhu dhowaan buu soo gelayaa, dhaqsaan u filaynaa haddii uu Alle idmo.
Waxaa waraystay: Ibraahim Maxameddeeq